Nahoana no BROAD Rock Wool?
Manao sy mamatsy vokatra insulation volon'ondry rock feno hendry sy maharitra izahay ho an'ny fanorenana. Azonao atao ny mahita vokatra ho an'ny insulation attic, insulation tafo fisaka, insulation rindrina ivelany sy anatiny, insulation gorodona, ary insulation valin-drihana, ary koa ny karazana fampiharana ara-barotra sy OEM insulation feno.
BROAD Rockwool insulation dia manana tombony miavaka izay mahatonga azy io ho safidy ho an'ny matihanina maro.
1. Fampiononana / Fahombiazana Thermal: Mampihena tsara ny fikorianan'ny rivotra ny rockwool ary indrindra ny fampitana feo. Ny tahan'ny fikorianan'ny rivotra avo kokoa dia midika fanalefahana feo tsara kokoa ho an'ny tontolo milamina kokoa. Ny rafitra Insulation natao tsara ho an'ny tranobe dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fahazoana hafanana tsy ilaina sy ny fahaverezana ary mampihena ny fitakiana angovo amin'ny rafitra fanafanana sy fampangatsiahana.
2. Fampiononana Acoustic: Ny insulation afaka mitroka ny feo entin'ny rivotra sy ny feon'ny fiatraikany dia manampy amin'ny fampihenana ny feo miditra ao amin'ny trano ary manatsara ny fampiononana acoustic ho an'ny olona ao amin'ny trano.
3. Fiarovana amin'ny afo: Miaraka amin'ny fitomboan'ny haavon'ny trano dia mitombo be ny mety hisian'ny afo ho an'ny olona ao amin'ilay trano. Tsy mirehitra Rockwool Insulation dia ampiasaina ho Passive afo fiarovana insulation amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny perimeter afo sakana, afo tonon-taolana, rindrina fidirana, lavaka sakana sns Rockwool tsy mirehitra sy ny afo mahazaka insulation dia safidy tsara ampiasaina amin'ny fanorenana facades.
4. Ny faharetana sy ny faharetana: Ny rockwool dia manala ny rano ary ny votoatin'ny vy dia mitazona ny biby mpikiky amin'ny toerana misy anao. Izany dia mitazona ny habaka insulation ho maina, ary misoroka ny fahapotehan'ny fitaovana fanorenana mifanila. Mahatohitra tanteraka ny lo, ny bobongolo, ny bobongolo ary ny fitomboan'ny bakteria.
SOSO-KEVITRA AMIN'NY INSULATION BANGETINA
• Mampihena be ny vidin'ny fampangatsiahana na fanafanana mihoatra ny 40%
• Manana fandraisana anjara voaporofo amin'ny fepetra takian'ny trano maitso
• Mitsitsy harena tsy azo havaozina
• Mampihena ny entona mandatsa-dranomaso (C02).
• Mampiroborobo ny fampiononana an-trano & fanatsarana ny fiainana
• Manafoana ny condensation amin'ny rindrina sy ny valindrihana
• Fanamafisana fanamafisam-peo nohatsaraina & fampisehoana acoustic tsara kokoa
• Manana fiatraikany tsara
• Mamela ny vidin'ny vidin-javatra ara-javakanto ivelany ivelany
• Tsy mitaky ny hivoaka ny trano mandritra ny fametrahana
• Tsy mandanilany ny trano fonenana anatiny
• Fampihenana ny saran'ny fikojakojana